Trondro trondro: toetra sy karazany isan-karazany | Ny trondro
Carlos Garrido | | Aquarium rano velona, Aquarium rano mangatsiaka
Raha ny fahalianana amin'ny fividianana trondro isan-karazany hanampiana ny aquarium misy antsika, dia misy karazany maro be misokatra eo alohanay, izay samy hafa ny habeny, ny lokony, sns. Na izany aza, ao anatin'io fahasamihafana be dia be io dia misy trondro iray izay miavaka ambonin'ny ambiny noho ireo toetra nampalaza azy. Miresaka momba ny tranolay isika, ny iray amin'n trondro rano mangatsiaka mahazatra
1 Toetra mampiavaka ny trondro
2 Trondro Kois
3 Ahoana no hikarakarana ny Kois na Carp antsika?
4 Karazana sy karazana trondro Carp
Toetra mampiavaka ny trondro
Avy amin'ny kaontinanta eropeanina sy aziatika ny karazan-kariby (Sipraus carpio) mahazatra. Iray amin'ireo trondro rano velona izany mahazaka kokoa ary mifanaraka tsara amin'ny toerana onenanaoIzany no antony nahombiazany tamin'ny fandresena saika ny lafiny rehetra amin'ny planeta ary nahazo "tombony" hiditra ny lisitr'ireo karazan-javamaniry vahiny mampidi-doza 100 manerantany indrindra manerantany araka ny Vondrona Iraisam-pirenena miaro ny natiora.
Matetika, ny santionan'ny olon-dehibe dia mahatratra halava miovaova eo anelanelan'ny 60 sy 90 santimetatra, ary lanja manodidina 9 kilao.
Ianao no mahalala hafiriana no velona ny trondro lay lehibe? Tombanana fa ny santionany sasany, raha mankafy ny toe-piainana sasany mandritra ny androm-piainany, dia mety hahatratra 1.2 metatra sy milanja 40 kg, ary mihoatra ny 60 taona, saika tsy misy! Ho tafavoaka velona ihany koa izy ireo amin'ny rano miangona sy somary mangatsiaka raha toa ka eo amin'ny mari-pana eo anelanelan'ny 17 sy 24 ºC izy ireo.
Izy ireo no tena omnivorous, ary ny sakafony dia misy zavamaniry anaty rano, bibikely, crustacea kely, sns. Ny vanim-potoanan'ny fiompiana dia manomboka amin'ny lohataona, ary mitranga amin'ny rano marivo sy matevina.
Mahazo milamina ny vehivavy 300.000 huevos izay, miankina amin'ny maripanan'ny rano, dia afaka mivoaka aorian'ny 3-4 andro.
Samy mahatratra ny fahamatorana ara-nofo ny lahy sy ny vavy amin'ny taona 4. Na dia priori aza izy io, tsy dia manana loko mirehareha loatra, any Shina ary, indrindra indrindra any Japon, dia nahomby tamin'ny alàlan'ny fiompiana babo izy ireo mba hiteraka karazana vaovao na karazana loko mamirapiratra sy mazava kokoa, lehibe kokoa ny habeny, fantatra amin'ny hoe koi.
Ny Koi, tsy toy ny karazana rahavavy hafa izay ny fahombiazany dia avy amin'ny sehatry ny fihazana sy jono, dia nanjary malaza toy ny biby fiompy. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, ny Koi amin'ny teny japoney dia midika hoe "fitiavana" na "firaiketam-po", ary ny fiompiana ireo biby ireo dia nitombo be tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, rehefa nanjary nalaza be ireo dobo koi Japoney izay nitondran'ny karpa mareva-doko ny hakantony. . Tena niely tamin'ny faritany samihafa any ivelan'ny faritr'i Azia ireo dobo ireo, ary na ny sarin'ny mpiompy karpa matihanina.
Ahoana no hikarakarana ny Kois na Carp antsika?
Araka ny voalaza etsy ambony, ny Kois dia tonga ny trondro anatiny tsara indrindra. Tena izany indrindra no soso-kevitra indrindra ho an'ireo izay manomboka amin'ity fialamboly mahafinaritra ity ary maniry ny hanandrana karazana tsy mila fikarakarana kely, dia hita amin'ny endrika ivelany sy ny loko, ary izany dia antoka iray hahombiazan'ny tobim-panafody misy azy ireo. sy dobo.
Ny trondro trondro na Kois dia manana tombana mialoha ny tapany afovoany na ambany avy amin'ny toerana misy azy ireo, miakatra hatrany ambonin'ny tany mba hanomezana sakafo. Afaka miaina anaty vondrona kely izy ireo, miaraka amin'ny total a Olona 6-7. Mazava ho azy, tokony homarihina fa indraindray izy ireo dia afaka maneho toetra mahery setra, indrindra amin'ny karazany kely kokoa. Asongadin'ireny toe-javatra kely sy be mponina ireny io toe-javatra io, izay mora ny mijery ny fomba anaovan'ireo trondro ireo manana olana masiaka. Noho izany dia tsy tsara ny mametraka azy ireo amina tanky trondro kely, toy ireo boribory mahazatra, na amin'ireo akondro akondro misy azy ireo miaraka amina karazana spimika marobe. Izany koa dia hahatonga ny fivoaranao ho tsara indrindra mety ho izy. Ilaina tokoa ny toerana ho an'ireny trondro ireny, ka noho izany dia tolo-kevitra ny aquarium mitovy amin'ny na mihoatra ny rano 90 litatra.
Ny maripanan'ny rano dia tsy tokony ho olana lehibe, satria efa hitantsika fa mifanaraka tsara amin'ny toetr'andro ireo biby ireo. Na dia nomena safidy aza ireo lay kely ireo mandefitra mangatsiaka kokoa izy ireo, raha mbola antonony izy io, noho ny hafanana, satria ny mari-pana ambony dia mety hitarika tsy fahampiana oksizenina ao anaty rano izay, raha ny lojika, dia mety hahafaty an'ireo mpanofa azy. Nisy tranga tany anaty dobo niaretana ireto biby kely ireto hatramin'ny fanala.
Sera - Loko Koi natiora,...
Sera - Sakafo feno ...
Mikasika ny sakafo kosa dia efa voalaza fa omnivora izy ireo (akaikin'ny karnavora), koa aza adala. Miaraka amin'ny fahana miendrika flakes izay hitantsika amin'ny orinasa rehetra manam-pahaizana manokana amin'ny biby, dia ampy izany. Fa raha irintsika ny hankafizany ny sakafo manankarena sy misimisy kokoa, dia afaka manome azy ireo vitsivitsy isika sakafo velona toy ny olitra bibikely bitika izay ampiasaina amin'ny jono. Ho fanampin'izany, ny famenon-tsakafo legioma sasany dia tsy maharary na dia manome aza legioma voajanahary, izay hijerentsika ny fomba hanaovan'izy ireo manaikitra kely. Tokony ho fantatrao fa amin'ny ririnina, ny Kois sy ny karpa kely dia miditra amin'ny dingana iray fahalainana, izay mampihena be ny asany, izay midika fa fihenan'ny metabolisma ary vokatr'izany, amin'ny filan'ny biby. Raha tsikaritray fa rehefa manome sakafo azy dia tsy laniny ny sakafo na anaovany izany amin'ny habetsaky ny kely dia tsy tsara ny manantitrantitra, mainka aza manahy, satria ny fihinanan-kanina dia mety hiteraka vokany mahafaty.
Ny olana iray hafa tena lehibe dia ny fanivanana ny rano. Ny fanivanana voalaza ao amin'ny aquarium na dobo misy antsika dia tsy maintsy atao amin'ny fomba iray ivelany. Raha ao anaty aquarium kely tsy misy sivana ny hazandranontsika dia tsy maintsy manova rano matetika isika, satria ity karazana ity dia miteraka fako be dia be izay manimba ny kalitaon'ny oksizenina voatahiry ao anaty rano. Manoro hevitra anao izahay handoka amin'ny sivana ivelany toy ireo.
Karazana sy karazana trondro Carp
Eo an-tsena dia omena karazana karazan-trondro karpa isan-karazany ho an'ny Aquarium aho. Na dia mitovy karazana aza izy ireo dia misy maro karazana trondro Tranobe izay samy hafa tokoa ny loko sy ny endriny. Fantatra amin'ny hoe "American Comet" Io no karazany miely indrindra satria mila fitandremana faran'izay kely indrindra. Ny vombony dia tsy lava manitatra ary manify ny vatany. Manaraka azy ny "Ryukin" o "Tail ny voaly", izay manana vombony lava sy lava volo. Mitovy be amin'ilay farany ny "Mivavaka" sy ny "Lohan'ny Liona", na dia manana papillae cephalic mampiavaka azy aza ireo karazana ireo. Ireo telo ireo, araka ny voalazantsika, no be mpampiasa indrindra, fa maro hafa manana hatsarana lehibe no azo ampiana ho azy ireo.
Ny angano ny trondro Koi
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Aquarium rano velona » Aquarium rano mangatsiaka » besisika
Liz sifuentes dia hoy izy:
Manana lay roa toa ny voasary aho amin'ny sary voalohany, izy ireo ihany no tsy volomboasary, volafotsy izy ireo, ny olana dia mena mena ny iray ary tsy fantatro ny antony, raha aretina na sakafo, ny lay hafa mitovy loko volafotsy
Valiny tamin'i Liz Sifuentes
Raha ny tena izy dia karaza ity karazan-trondro ity fa tsy karpa, betsaka ny zavatra itovizany, saingy samy hafa be izy ireo. Ohatra, mariho fa ny karpa dia zara raha misy dandruff ary tsy miloko izy ireo ,. Etsy ankilany, ny carpin eny ary izy ireo koa dia karazana loko isan-karazany ary manana rambony roa aza izy ireo, mampiavaka an'i Shina izy ireo. raha ny marina dia notezaina hohanin'ny olombelona izy ireo.
Ny karpa koa, fa tsy mitovy ... na izany aza hiezaka hamaly ny fanontanianao aho.
Tokony hotadidinao fa ny trondro rehetra any amin'ny fahababoana dia mila manana oksizena ampy ao anaty rano, ilaina ny manandrana manatsara ny rano amin'ny alàlan'ny fitaovana elektrika (fitaovana).
Indraindray dia mety ho ny sakafo tsy feno ihany koa.
Ratsy ny rano paompy noho ny fahasarotan'ny sokay sy ny klôro azy.
Soso-kevitra: ovao ny dobo ary ezaho ovaina ny sakafo, manoro hevitra anao koa aho mba manatona manam-pahaizana manokana fa tsy izay milaza fa mahalala.
Valio amin'i DIEGO
NY CARP iraisana dia iray amin'ireo biby izay mety ho vitsy ny olona nanana ny tombontsoa hahita amin'ny ambaratonga hafa. MITADIAVY IZAHO fa biby dia tonga any amin'ny karazan'ala sarotra atao ny mino.
Annette alvarez dia hoy izy:
Salama, izaho dia watercolor mitondra ny lohateny, lazaiko aminao fa golfhis na trondro volamena, na rambony komet na rambony miely dia lakroa. Azonao atao ny mividy santionany misy toetra sy loko sasany, mba hanitsiana rehefa mandeha ny fotoana dia afaka manova ny morphologie sy ny lokony koa izy io satria azon'ny ray aman-dreniny sy ny razany ho azy ireo. Toy ny mivavaka fa misy metamorphosis sasany izay mampitombo azy lehibe loatra ka mety hanakana ny fahitana. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy atao ny fidirana an-tsehatra amin'ny fandidiana ary esorina ny ambim-bava. Nahavita vitsivitsy aho mazava ho azy nandritra ny fanatoranana ary atao ambony latabatra ivelan'ny rano miaraka amin'ny fitandremana mety izany. Tamin'izy rehetra dia nahomby tanteraka aho. Azoko atao ihany koa ny mahazo kista any amin'ny faritra sasany amin'ny vatana izay marefo kokoa ka esorina amin'ny risika bebe kokoa. Manantena aho fa hahasoa anao ity famerenana ity. Avy any Orogoay aho, misy fanontaniana apetraka aminao. Salam Annette
Valiny tamin'i Annette Alvarez
Liz, aza adino fa ny mari-pana amin'ny rano dia tokony ho ambany ary ny dobo lehibe kokoa ary miaraka amin'ireo singa mifandraika amin'izany amin'ny androm-piainany lava.
Horace Paez dia hoy izy:
Manidina trondro ho an'ny cyprinid aho, misy karazany maro ny karpa sy barbel, amin'ny fiainana ara-dalàna ary tsy matavy ho an'ny trondro manjono trondro dia mety hahatratra 30Kg. Misy 47 fa efa matavy loatra izy ireo (noho ny boilis) .Raha ny tarehinao dia afaka mahita ny sariko karazana lehibe sasany ianao. facebook com / flyfishingsevilla
Valiny tamin'i Horacio Paez
Liz: raha tsy manala baraka ny valiny teo aloha dia mety misy antony maro, tsy haiko hoe firy taona ny hazandranonao nefa raha latsaky ny 3 taona izy ireo dia misy zavatra tena ilaina raisina satria ara-dalàna tokoa, samy ao amin'ny tranga misy karpa na koi mahazatra Toy ny amin'ny trondro volamena saika ny karazany rehetra hatramin'ny nahaterahany ka hatramin'ny 3 taona, normal foana ny fiovan'ny loko tsy tapaka, imbetsaka aho no nifidy trondro kely x ny loko fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia miova ny loko taty aoriana ny 3 taona niainany, ary ho ahy manokana ny ankamaroany dia mazàna manana loko mena sy volomboasary tanteraka
Ohatra 3, mavo iray misy aketas ary lamosina mainty, miafara amin'ny volomboasary tanteraka izy, volomboasary manana vombony mainty ankehitriny dia volomboasary tanteraka, volomboasary misy tsipika mainty eo afovoan'ny vatana, ankehitriny dia mainty avokoa izy io afa-tsy ny volomboasary mahery fa miaro ny lohany izy, ny 3 dia carassius na (trondro volamena) amin'ny karazany iraisana izay tiako indrindra
SALAMO FA MANANA 1M D LONG X 0.40 CN D MAFY ARY 030 D JONO
Azoko atao ny mametraka ny hazandranomasina CARP, mpifanolobodirindrina amiko, manome ahy eo alohan'izy ireo ary manome lanja ny saka azy ireo
Salama, vao nanao dobo 2000 litatra teo ho eo aho ary nividy trondro karpa 6 fa nandritra ny herinandro izay nahitako azy ireo dia tena nifindra izy ireo, nanome sakafo azy ireo indray mandeha isan'andro isan'andro ho an'ny koy. Ara-dalàna ve raha tony izy ireo? amin'ny maha zava-misy fanampiny ahy ao an-tanànako Santiago de Chile dia misy 14 degre ny andro ary 7 degre eo ho eo amin'ny alina dia amin'ny fararano isika.
Avy amin'ny tanànan'ny Bahia Blanc atsimon'ny pvcia of Bs aho, Arzantina ... ny fanontaniako dia ny fanomezana sakafo karpa amin'ny ririnina, fantatro fa any amin'ny firenena toa an'i Espana dia manjono azy ireo mangatsiaka be izy ireo, eto aho dia nanandrana ary Tsy afaka nahazo ... ny fanontaniako dia raha misy ny fahafahana manjono azy ireo sa tsy azo atao izany, misaotra betsaka sahady
Ana Lilia dia hoy izy:
Salama, manana trondro toy ilay mavo izay lazain'izy ireo fa koi volamena aho ary tiako ho fantatra raha maniry be izy io
Mamaly an'i ana lilia
Dolly dia hoy izy:
Firy ny fototarazo ananan'ny karpa amin'ny chromosome 1?
Mamaly an'i dolly
Te hahafantatra aho raha manana trondro karpa shiliana amidy, ilay iray izay misy ao amin'ny tohodrano Chiliana
RAUL RAMOS dia hoy izy:
Inona no mety hitranga raha apetrako ao anaty dobo filomanosana tsy ampiasaina izy ireo, misy rano miandrona mandritra ny 4 taona, nanandrana ny PH aho, ary tonga lafatra, notenenin'izy ireo hametraka aerator aho, satria tsy misy sivana, misy ny pisinina 5000 litatra eo ho eo, miaraka amin'ny antsasaky ny POOL.
Valiny amin'i RAUL RAMOS
Salama maraina, manana dobo feno karpa be aho, mila manamboatra ao anaty dobo aho ka mila manala azy ireo, tiako ny tolo-kevitra momba ny karazana reservoir aiza no tokony hahitako azy ireo rehefa manao ny fanamboarana ny dobo aho ary mandra-pahoviana ny fotoana voalaza indrindra?
David bravo morales dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra aho raha manimba karazan-trondro hafa ny hazandranako koi satria maty ny trondro hafa tarehiko liona ary tsy haiko ny antony. Misaotra anao.
Valiny tamin'i David Bravo Morales
Salama, mila oxygen ny trondro karpa
Salama, ny trondro karpa dia mila oksizena, milomano betsaka ny hazandrano ary tiako ho fantatra raha ilaina izany raha afaka manampy azy.
Firy ny karazana trondro?
Mandra-pahoviana ny trondro iray velona?